MW Xasan Sheekh oo sheegay in la weeraray gurigiisa | KEYDMEDIA ONLINE
MW Xasan Sheekh oo sheegay in la weeraray gurigiisa
Ciidamada ka amar qaata Farmaajo, ayaa weerar ku qaaday guriga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in ciidamo uu soo adegsaday Farmaajo ay duullaan ku soo qaadeen guriga uu ka deggan yahay magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuu ka digay in amniga la siyaasadeeyo, wuxuuna dhibka ka dhasha duullanka lagu qaaday hoygiisa uu sheegay inuu qaaayo Farmaajo.
“Waxaa nasiib darro weyn ah in ciidan ka amar qaata Madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadaan hoygeyga. Waxaan horay ugu digay kuna celinayaa khattarta ay leedahay siyaasadeynta ammaanka. Mas'uuliyadda dhibaatada ka dhalata arrinkan waxaa qaadaya Farmaajo” Ayuu yiri, MW Xasan.
Ma’aha markii koobaad ee weerar ceynkaan ah lagu qaado hoyga Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxmuud, waxaana duulllan lagu ekeeyay huteel Maa’idda 19 Febaraayo 2021, oo xilligaas ay ku sugnaayeen isaga iyo Shariif Sheekh Axmed.
Ciidamo Militari ah oo ka gadoodsan muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo ayaa maanta la wareegay qeybo ka mid ah xaafadaha, degmooyinka Cabdicasiis iyo Kaaraan.